Nepal Mamila | नेपाल सरकारविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिन एनसीसीहरुको माग (प्रेस विज्ञप्ति सहित) - Nepal Mamila नेपाल सरकारविरुद्ध दायर मुद्दा फिर्ता लिन एनसीसीहरुको माग (प्रेस विज्ञप्ति सहित) - Nepal Mamila
लण्डन । गैर-आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरुको दोश्रो विश्व भेलाले नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने केन्द्रको कार्य दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै फिर्ता लिन आव्हान गरेको छ ।
“यस्तो कार्यले संस्थाभित्र विवाद बढ्दै जानुका साथै अन्ततः संघलाई विभाजनको बाटो तर्फ धकेल्ने खतरा देखिएको छु”, भर्चुअल भेलाको निष्कर्ष छ, “त्यसैले अध्यक्ष कुमार पन्त र प्रमुख संरक्षक डा. शेष घलेले सहकार्य गरी डेलिगेट्स सम्बन्धी विवाद समाधान गरी आम सहमतिका आधारमा मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाउन हामी माग गर्दछौं ।”
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एनसीसी स्पेनका अध्यक्ष शालिक राम डुम्रेले “बिचौलिया प्रयोग गरेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्ने समाचारहरु आइ रहेका छन्। यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो”, सत्य, तथ्य के होरु तुरुन्तै सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी ‘टिम बद्री’ ले शनिबार ककसको कार्यक्रम प्रकाशित गरेको दावी गरे । “एकै दिन २ ओटा कार्यक्रम किन गर्नु प-यो? अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्ने गरी छलफल गर्न पाइदैन । त्यो बन्द गर्नु पर्छ”, उनले भने।
यसैगरी संरक्षक परिषद्लाई सघाउन सबै सल्लाहकारहरु, हाल कामचलाउ अवस्थामा रहेको आइसीसी तथा संसारभरि रहेका गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई अपिल पनि गरेको छ ।